बुद्धिमान बाँदर र चीनको समृद्धि - फ्री प्रेस नेपाल
२८ फाल्गुन २०७५, मंगलवार २०:२५
in अर्थतन्त्र, अर्थराजनीति, राजनीति, समाज, समाजशास्त्र
चीनमा ‘मालिक’ र ‘कामदार’ संगै बसेर खानु कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा ठानिन्छ भन्ने सुनेकोथिंए, साँचो रहेछ। तपाईं यस्तो वर्गविभेद आँखाकै सामु देख्नुहुन्छ, टिठाउनु पनि होला तर त्यसको विरुद्ध तपाईं केहि गर्न सक्नुहुन्न ।
– जेवी पुन मगर
विक्रम संवत दोश्रो र चौथो शताब्दिमा लिपिबद्ध गरिएको भनिएको चीनका दार्शनिक कन्फुसियसका नीति बचन मध्ये एउटा बचन रोचक छ, जसका चार चर छन् । ति हुन् – ‘नकारात्मक कुरा नसुन । अरुमाथि कु–दृष्टि नलगाऊ । अप्रिय नबोल र दुष्कर्म नगर ।’ यसैलाई १७औं शताब्दिमा जापानका बौद्धमार्गीहरुले ‘नराम्रो नहेर, नराम्रो नसुन र नराम्रो नबोल ‘भनि संक्षिप्त र सरलीकरण गरिदिए । यसलाई अझ सरल रुपमा सम्झाउन आँखा , कान र मुख बन्द गरेका मिजारु, किकाजारु र ईवाजारु नाम गरेका तीन बाँदरको चित्रांकन समेत गरियो ।
यी तीन बाँदरलाई बुद्धिमान बाँदर भनियो । दैनन्दिन जीवनमा लागु गर्न प्रतिपादन गरिएको तीन सुत्र बोक्ने यी बाँदरलाई महात्मा गान्धीले भारतमा अग्रेंज विरुद्धको स्वतन्त्रता संघर्षका निम्ति ‘अहिंसा र शान्ति’ को प्रतिकको रुपमा प्रयोग गरेकोले यसलाई महात्मा गान्धीको ३ बाँदर पनि भनिन्छ । त्यसैले पूर्वीय समाजमा यी ३ ‘बाँदर शिक्षा’ लाई अहिंसा र नैतिकतासंग जोडेर हेरिन्छ ।
यहि नीतिबचन घुमीवरी अहिले चीनको आर्थिक सम्बृद्धिसंग जोडिन आईपुगेकोछ । तर अहिले यो नीतिबचनले दिने शिक्षाको बुझाई र त्यसलाई ग्रहण गर्ने प्रक्रियाले भने भिन्नै स्वरुप ग्रहण गरिसकेकोछ। नेपालमा नलेखिएकोले धेरैले चीनको समृद्धिको बोझमुनि थिचिएका बहुसंख्यकहरुको कथा थाहा नपाएका हुनसक्दछन् । आर्थिक रुपले विश्वको दोश्रो ठुलो देशमा यदि उद्यम गरि पैसा कमाउने हो भने ‘आँखा, कान र मुख’ बन्द गर्नुपर्छ । अर्थात चीनमा जे भैरहेकाछन्, गरिएका र गराईएकाछन् ती सबै असल छन्, त्यहाँ नराम्रो केहि हुँदैनन् भनि ‘बाँदर बचन’ वाचन गर्नुपर्छ र त्यसलाई पालन पनि गर्नुपर्छ भन्ने यथार्थ धेरैलाई थाहा नहुन सक्दछ ।
यो बाँदर मन्त्र सबैभन्दा बढी ति करौंडो श्रमिकहरुमाथि लागु हुन्छ जसले विश्वलाई आफ्नो खुन पसिनाले ‘समृद्धि र भोगविलास’ को बुलेट ट्रेनमा दौडाईरहेकाछन् । सन २००७ मा ७५३.२१ मिलियन रहेको श्रमिक जनसँख्या बढेर २०१७ मा ७७६.४ मिलियन पुगेको चीनमा ति श्रमिकहरुको तलबमान भने देशको समृद्धिको अनुपातमा निकै कम देखिन्छ । सन २०१० मा त्यहाँका श्रमिकहरुले न्यूनतम तलबमान ११२० युआनका दरले पाउँथे भने त्यो बढेर २०१८ मा जम्मा २४२० युआन पुगेकोछ । चीनमा कामदारहरुको अवस्था निकै टिठलाग्दो छ ।
यो यथार्थ मैले १३ जुन २०१४ का दिन चेम्बर अफ कमर्स, हङकङले गराएको ब्यापारिक केन्द्र सेन्जेनको एक दिने शैक्षिक भ्रमणपछि राम्ररी बुझ्न पाएकोहुँ । चीनमा ब्यापार कसरी चलिरहेकाछन् र त्यहाँबाट नेपालीले के कस्ता ब्यापार–ब्यावसाय गर्न सक्छन् भनि संभावनाहरुमाथि सरसर्ती नजर लगाउन चेम्बरले हङकङका स्थापित ब्यापारी सहित केहि ईच्छुकहरुलाई त्यहाँ लगेकोथियो । सेन्जेनमा ब्यावसायिक कार्यालय खोली दक्षिण अमेरिका र अफ्रिका लगायत देशहरुमा मोबाईल ब्यापार गरिरहेका उद्यमी राजेन्द्र थापाको नेतृत्वमा उक्त भ्रमण गराईएकोथियो । भ्रमण टोलीमा दुई दशक देखि चीनमा उत्पादित बस्तु विश्वबजारमा बेचिरहेका एनआरएनका पूर्व केन्द्रिय कोषाध्यक्ष प्रितम श्रेष्ठको अनुभवी साथ पनि थियो । ति दुईले चीनमा ब्यापार ब्यावसाय कसरी चलिरहेकाछन् र सरकारले कसरी त्यसलाई प्रवद्र्धन र नियमन गरिरहेकोछ भन्ने बारेमा जानकारी दिएका थिए ।
कम्यूनिज्म र पूँजीवाद
चीन विश्वको दोश्रो आर्थिक शक्तिशाली देश बनेपछि त्यसले ग्रहण गर्ने सत्ता शक्ति पनि त्यहि अनुपातमा बृद्धि भएकोछ । चीनमा लगानी गर्न चाहने धनाढ्य पश्चिमाहरुको ओईरोले अमेरीकाको निदहराम गरिदिएको भन्दै चिनिया अखबारहरु नै समाचार उद्यम गरिरहेकाछन् । त्यस्तो बैचारिक उद्यमको बाछिटा चीनको अध्ययन भ्रमणबाट फर्किएका हाम्रो बौद्धिकबृत्त र संचारकर्मीहरु मार्फत हामीकहाँ पनि आईपुगेकोछ । एकजना परराष्ट्रमन्त्रालय स्रोतका भनाईमा पछिल्लो पाँच बर्षयता सरकारी गैरसरकारी कर्मचारी, संचारकर्मी, नेता, बौद्धिक र सामाजिक अभियन्ताहरुको चीनमा हुने अध्ययन भ्रमण प्रायशः दिनहुजसो हुने गर्दछ । तर आश्चर्य के हो भने यत्रो भ्रमण भैरहेकोमा चीनमा भैरहेको ‘समृद्धि’ को बोझमुनि थिचिएका बहुसंख्यकहरुको कथा एउटा पढ्न पाइएकोछैन ।
सिद्धान्ततः श्रमिकहरुको हितलाई सर्वाेपरि ठान्ने र बजारलाई राज्यले नियन्त्रण गर्ने ‘कम्युनिष्ट देश’ मा पैसा र बजार आफ्नो नियन्त्रणमा हुनैपर्ने ‘पूँजिपति वर्ग‘ किन लगानी गर्न मरिहत्ते गरिरहेकाछन् ? यी दुई ध्रुबको सानिध्यता कसरी संभव भयो ? मलाई सधैं दिमागमा उठ्ने प्रश्नहरु थिए । त्यसको जवाफ राजेन्द्रले चाईना साउथ सिटी स्थित आफ्नो मोवाईल फ्याट्रीमा भ्रमण गराएपछि मात्र पत्ता लाग्यो ।
उनको फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने भर्खरका युवायुवतीहरु मशीनले जसरी काम गरिरहेकाथिए । तिनलाई देखाउदैं चिनिया उत्पादन जापान र कोरीया निर्यात गर्ने ‘एक्सपर्ट-इम्पोर्ट’ ब्यापारी प्रितम श्रेष्ठ भन्दैथिए, संसारमा चिनिया, कोरियन र जापानीजहरु जति मेहनती अरु छैनन् । मरिमरि काम गर्छन् । उनको जवाफमा राजेन्द्रले बताए अनुसार, १० घण्टा ( २ घण्टा लन्च ब्रेक) काम गरे बापत ति कामदारले जम्मा मासिक २ हजार युआन तलब र बस्ने सुविधा पाँउछन् । खाने जोहो तिनले त्यहि तलबबाट गर्नुपर्छ । सरकारको नियम अनुसार प्रत्येक कामदारलाई मालिकले दुई लाख बराबरको जिवन विमा गरिदिनुपर्छ । त्यसका निम्ति मासिक दुई सय थप खर्च हुने गर्छ । तर राजेन्द्रले भने आफ्ना कामदारलाई पाँच लाख बराबरको वीमा गरिदिएको बताए । उनले भने, ‘मालिकले आफ्ना कामदारलाई यति सुविधा दिईनुपनि चीनमा ठुलो मानिन्छ ।’ सिमाना जोडीएको चीनको स्वशासित शहर हङकङमा यति कामका निम्ति मालिकले आफ्ना कामदारलाई कम्तिमा मासिक १२ हजार तिर्नुपर्छ ।
हङकङमा कन्स्ट्रक्सन र सेक्यूरिटी उद्यमबाट गतिलो पैसा कमाईरहेका निर्माण ब्यावसायी नुतन खड्काले उत्साहित हुँदै यस्तो मोवाईल कम्पनी नेपालमै स्थापना गर्न सकिदैन र भन्न मात्र के भ्याएकाथिए हङकङ र चीनलाई केन्द्र बनाई ब्यवसाय गरिरहेकाहरुको प्रायशः सबैको एउटै जवाफ थियो– नेपालमा तत्काल संभव छैन । त्यसका पछाडि तिनले दिएका केहि वजनदार तर्कहरु थिए – चीनमा कामदारहरुका युनियनबाजी चल्दैनन् । यदि चीनमा कसैले युनियनका नाममा हड्ताल गर्ने धृष्टता गरे त्यसलाई विभिन्न बहानामा झुण्ड्याएर सजाय दिईन्छ । त्यसैले त्यस्तो दुस्साहस कसैले गर्देनन् । सरकारले नै यस्तो वातावरण उपलब्ध गराईदिएपछि र ‘कौडीको भाउ’मा कामदार पाएपछि चीनमा लगानीकर्ताहरु ढुक्क छन् ।
सस्तो र ‘नाक, कान ,आँखा छोपिएका’ श्रमिक पाएपछि विश्वका साहूहरु चीनिया भूमीमा उत्रने नै भए । त्यति मात्र होईन । उद्यमीहरुलाई चाहिने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लागेको कर रेडीमेड सामान बनाई निर्यात गर्दा त्यो रकम उसैलाई फिर्ता गरिन्छ । अन्य देशमा आयमा कर लाग्ने नियमको उल्टो चीनमा खर्चमा कर लगाएर सरकारले पूँजी बचतलाई ध्यान दिएको देखिन्छ । यसले पनि लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गरेकोछ ।
त्यहाँ ब्यवसाय गरिरहेका नेपालीहरुको भनाईमा विश्वका महँगा ब्रान्डका कपडा, गाडी, मोवाईल लगायत सिंयो देखि जहाज सम्मका पार्टपूर्जा सबै चीनमा बन्नुको कारण नै सस्तो श्रम र सरकारको मालिक संरक्षण गर्ने कडा नीति हो जसले सबैलाई चीन तर्फ तानिरहेकोछ । यदि महँगा कामदार र ‘नाक, कान, आँखा’ कहिल्यै बन्द नहुने र युनियनका नाममा कम्पनी नै डुबाईदिने ‘गणतान्त्रिक नेपाल’ जस्तो स्थिति चीनमा भैदिएकोभए त्यहाँ कोहि आफ्नो लगानी डुबाउन आउने थिएनन्। त्यसैले भ्रमण टोलीका सदस्य नेपालमा लगानीको प्रसंग उठ्नासाथ दुई हात उफ्रिएकाथिए ।
हङकङका नेपाली ब्यापारीहरुको नेपाललाई हेर्ने यो दृष्टिकोण दुई तिहाईको ‘स्थिर सरकार’ बन्नुअघिको हो । केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको अहिलेको कमोबेश चिनिया मोडेलबाट प्रभावित सरकारको नीतिबाट ति कति आश्वस्त छन्, त्यो बुझ्न पाएकोछैन । तर अद्यापि तिनले नेपालमा उद्यम गर्नेगरि राम्रो लगानी भित्रयाउने काम गरेको कम्तिमा मेरो जानकारीमा छैन ।
हङकङबाट अढाई घण्टाको सामान्य मेट्रो यात्रामा पुगिने चीनको अन्र्तराष्ट्रिय ब्यापार केन्द्र गोन्जाओमा पटक पटक गरेको भ्रमणमा मैले एउटा अर्काे आश्चर्य देख्याथिंए । सस्तोमा काम लगाईने गोन्जाओका रेष्टुरेन्टमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई टिप्स लिने अधिकार समेत छैन । कतिपय ठाँउमा बलजफ्ती गर्दा समेत मरिगए लिन मान्दैनन् । सेन्जेनमा समेत यस्तै एउटा घट्नासंग एकाकार गर्नुपर्यो । हामीलाई घुमाउने मिनीबसका युवा ड्राईभरलाई बेलुकी खाना खानेबेला चेम्बरका अध्यक्ष डाँसुराम पराजुली, उपाध्यक्ष कमल पौडेल लगायतकाहरुले हामीसंगै राउन्ड टेवलमा आउन बारम्बार बोलाउँदा उनी मान्दै मानेनन् । अर्काे टेवलमा बसेका उनी मुसुमुसु हाँसिदन्थे मात्र । बरु सबैले कर गर्न थालेपछि उनी आँखा छलेर टाप कसे । उनले तल्लो तलामा गई एक्लै खाना खाएको बताईएकोथियो ।
चीनमा ‘मालिक’ र ‘कामदार’ संगै बसेर खानु कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा ठानिन्छ भन्ने सुनेकोथिंए, साँचो रहेछ। तपाईं यस्तो वर्गविभेद आँखाकै सामु देख्नुहुन्छ, टिठाउनु पनि होला तर त्यसको विरुद्ध तपाईं केहि गर्न सक्नुहुन्न । किनकी चीनमा कन्फुसियसको तीन बाँदरले कहिल्यै यस्ता कुरा देख्दैनन्, सुन्दैनन् र विरोधमा बोल्दैनन् भन्ने कुरा तपाईंले हेक्का राख्नुपर्छ ।
शक्ति केन्द्रिकृत गर्ने द्रुत अभियानमा लागेका भाजपाका नेता नरेन्द्र मोदी चीनको यो मोडेलमा यति आशक्त थिए कि उनले गुजरातलाई दुरुस्त त्यहि साँचोमा ढाली केन्द्रिय सत्तामा उक्लिए । तिनै प्रधानमन्त्री मोदीले सत्ता सम्हाल्नासाथ भारतमा सुब्यवस्थित रुपमा शुरु गरिएको ‘आँखा, कान र मुख’ बन्द गर्ने बाँदर सुत्रलाई राज्यधर्म-कर्मकै रुप दिन खोजिरहेकाछन् । पूरै भारतलाई यहि साँचोमा ढाल्न शुरु गरिएको यस्तो रणनीति ठ्याक्कै चीन नीतिसंग मेल खान्छ । तर ‘संघीय लोकतान्त्रिक राज्य’ भारतमा ‘एकात्मक कम्युनिष्ट राज्य’ चीनको जस्तो तीन प्रमुख जनेन्द्रिय बन्द गर्ने राज्यनीति चल्छ, चल्दैन भविष्यले नै देखाउला। तर त्यसको लेखाजोखा सन २०१९ मा हुने निर्वाचनले पनि केहि मात्रामा तय गर्नै नै छ ।
नयाँ शहर सेन्जेन
पहिला सानो र दुर्गम गाँउ सेन्जेनलाई सन १९७९ को अन्ततिर विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरि विदेशी लगानी आब्हान गरि विकाश गर्न थालिएपछि यसले अहिलेको भब्य स्वरुप धारण गरेको हो । यो विश्वकै तिब्र विकाश भैरहेको शहरमा पर्दछ । क्यान्टोनिज भाषीहरुको उद्भव थलो मानिने गुन्डोङ प्रोभिन्सको एक प्रमुख ब्यापारिक यस शहरलाई हङकङकै स्टाईलमा विकाश गरिएकोछ । हङकङसंग सिमाना जोडिएको यहाँ सडक चौडा र बसोबास ब्यवस्थित छन् । गोन्जाओको तुलनामा स्वच्छ र सफा यहाँ राष्ट्रिय जनगणना २०१० अनुसार, १०.३५ मिलियन मान्छे बस्छन् । जनसाँख्यिक रुपले सेन्जेन चीनको दशौं ठूलो शहर हो ।
विश्वकै ब्यापारिक शहरको रुपमा चिनिने गोन्जाओ जस्तै सेन्जेनमा पनि विकासले हङकङलाई चुनौती दिन खोजेको महसुस गराउँछ । सेन्जेन हेरिसकेपछि के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने चीन सरकार जसरी पनि विकास चाहन्छ । त्यसका निम्ति आर्थिक क्षेत्रलाई हड्तालमुक्त राखी जतिसक्दो विदेशी लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न चाहन्छ । त्यो नगरिए विश्वकै पहिलो जनसंख्या भएको देश चल्नै सक्दैन। विदेशी लगानीका कारण अहिले तिनलाई दुई छाक खाने जोहो हुनेगरि कामको चाँजोपाँजो मिलाईदिएको सरकारले ति कामदार कामले लखतरान परुन र विद्रोह गर्नतिर नलागुन् भन्ने चाहन्छ । काम गर खाउ तर यताउति नगर भन्ने सरकार कामदार धनी नहोऊन भन्नेमा पनि त्यत्तिकै सजग देखिन्छ । त्यसैले सरकारको ढुकुटी सक्षम हुँदाहुँदै पनि श्रमिकको तलव बढाईएकोछैन । नीजि कम्पनीहरुलाई त्यसरी बाध्य पारिएकोछैन ।
एकातर्फ सरकार बाहिरका लगानीकर्ताहरु नफर्किऊन भन्नेमा सतर्क देखिन्छ भने अर्काेतर्फ श्रमिकको आर्थिकस्तरले निश्चित सिमा कट्न नपाउओस् भन्नेमा पनि उ त्यतिकै सजग देखिन्छ। जबकि स्थानीयको भनाईमा महँगाई दिनदिनै बढिरहेकोछ । राजेन्द्रकै कम्पनीमा काम गर्ने म्यानेजर भन्छिन्, ‘बाहिरबाट हेर्दा युआन बढेको देखिन्छ तर वास्तवमा भित्र त्यसको मुल्य घटिरहेकोछ । पहिला सय युआनमा १० किलो बंगुरको मासु आँउथ्यो तर अहिले ७ किलो भन्दा बढी आँउदैन । महँगाई बढेकोछ । तलबले खान पुग्दैन ।’
अहिलेसम्म यो महँगाईको चापले सामान्य श्रमिकको तुलनामा राम्रो आयआर्जन हुने उनी जस्ता कामदारलाई नछोएको हुनाले उनी ढुक्क जस्तो देखिन्छिन् । त्यसैले उनलाई चिनिया राष्ट्रवादले गाईरहेको विश्वशक्ति बन्ने गानले लठ्ठ पारेको जस्तो देखिन्छ । उनलाई के गर्व छ भने चीनको आर्थिक बृद्धि र त्यसले आर्जन गरेको शक्तिले चीनले चाहेमा विश्वमा जे पनि गर्न सक्ने हैसियत बनाएकोछ । त्यो समृद्धिले उनले आफ्नो आत्मसम्मान ह्वात्तै बढाएको महसुस गरेकिछन् । साउथ चाईना सी प्रकरणमा जापान र फिलिपिन्सको सेंखी झारेको ठान्ने उनले क्रिमिया प्रकरणका कारण युरोप र अमेरिका मोर्चाबन्दी गरि रुसलाई एक्ल्याउँदा चीनले उद्दार गरिदियो । उनी दंगदास पर्दे भन्छिन्, ‘युरोपले ग्यास नकिनिदिने भनेपछि सहयोग माग्न आएको रुसको सबै ग्याँस चीनले किनिदिएर रुसलाई संकटबाट बचायो ।’ तिनलाई के विश्वास छ भने यसरी बलियो हुँदै गैरहेको चीन सरकारले भविष्यमा आफ्ना एक एक जनताको सम्बृद्धिका लागि नसोंची धरै छैन । उनी त्यस्तो दिन पर्खेर बसिरहेकिछन् ।
तर जनता धनी भए तीन बाँदरका आँखा, नाक र कान खुल्ला हुने र स्वतन्त्रताको नाममा तिब्बत, हङकङ, ताईवानमा र केहि मुस्लिम बहुल क्षेत्रमा जस्तो सरकार विरुद्ध नारावाजी शुरु हुन थाल्ने आँकलन गरेर बसिरहेको बेईजिङ आफ्नो ‘बजारवादी कम्युनिष्ट’ नीतिमा दाँयाबाँया सर्ने कम्तिमा अहिले सम्मको क्रियाकलापले देखाउँदैन । बरु नागरिक स्वतन्त्रताको आडमा आफुहरुमाथि पश्चिमा घेराबन्दी बढ्ने विश्लेषणमा बेईजिङले तिब्बत, ताईवान, मकाउ र हङकङ जस्ता संवेदनशील स्वशासित क्षेत्रलाई झन बढी कस्दै लगिरहेकोछ ।
Tags: capatilismchinacommunismHongkongissue-6JB Pun Magarlabourtin bandharworkअंक-६जेवी पुन मगरहङकङ